featured – dulmidiid
Hambalyada Sanadka Cusub Ee Hijriga 1439
Waxaa maanta bilowday sanadka cusub ee Hijriga 1439 , sanad walba maanta oo kale waxaa ay muslimiinta u dabaal-degaan maalintii Hijrada. Taariikhda hijriga ah waxaa laga bilaabay Hijradii nabiga( NNKH )uu ka hijrooday magaalada Makka una hijooraday magaalada
War-qoraal ah oo ka soo baxay Madaxtooyada KMG ah ee magaalada Cadaado ayaa looga hadlay Mowqifka Galmudug ee ku aadan khilaafka u dhaxeeya Wadamada Khaliijka kaas oo cuna-qabateyn lagu saaray Dalka yar ee Qatar. Galmudug ayaa sheegtay in ay taageereyso
Madaxweynaha Hirshabeelle oo maanta ku wajahan Beledweyne.
Wararka naga soo gaarayo magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ayaa soo sheegayo in maanta magaalada Beledweyne uu ku wajahan yahay Madaxweynaha Cusub ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo Wafdi uu hogaaminayo oo ka tirsan Golayaasha Hirshabeelle. Madaxweyne Waare ayaa
11 Wasiir oo iska casilay xilkii ay ka hayeen maamulka Hirshabeelle
Wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in goor dhaw halkaa is casilaad uga dhawaaqeen 11 wasiir oo ka tirsanaa maamulka gobolleedka Hirshabeelle. Shir jaraa’id oo ay qabteen ayeey ku sheegeen is casilaaddooda wax qabad
Ra’iisul Wasaare Khayre “ Maamulka Gobolka Banaadir waxaa uu shaqaalleysiin doonaa 1,000 dhallinyaro ah”
Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu shaqaalleysiin doono ku dhawaad 1,000 qof oo dhallinyaro ah. Md. Khayre, ayaa sheegay in uu dhawaan soo saari doono, warqad ku amreysa guddoomiyaha Gobolka
Hub iyo Saanad ciidan oo lagu wareejiyay Dagaalyahanada difaacaya Abuu Mansuur Hub iyo Saanad ciidan oo lagu wareejiyay Dagaalyahanada difaacaya Abuu Mansuur
Wararka ka imaanaya magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa sheegaya in maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya hub iyo saanad ciidan oo aad u badan ku wareejiyeen dagaalyahanada difaacaya Sheekh Muqtaar Roobow Abuu Mansuur. Wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan
7 Bil Kadib Doorashada, Sababaha Hortaagan In Guddiga Doorashada Dadban 2016 Uu Xilka Iyo Dokomentiyada Ku Wareejiyo Xaliimo Yarey July 28, 2017
Golaha shacabka ayaa 19-kii April soo saaray sharci ku saabsan buuxinta kursiga ka bannaanaada golaha shacabka Soomaaliya, isla sharcigaas waxaa la faray gudiyada xilheyntooda ay dhammaatay ee kala ah: guddiga federaalka hirgelinta doorashada daban 2016 iyo guddiga xallinta khilaafaadka doorashada
Madaxweynaha Hirshabele oo Mooshin ka dhan Ah Laga Keenay
Mudanayaasha baarlamaanka dowlad gobolleedka Hirshabeele oo kulan ku yeeshay magaalada Jowhar ayaa soo gudbiyay mooshin kalsoonida lagala noqonayo Madaxweyne Cali C/laahi Cosoble. Xildhibaanada ayaa kulan ku yeeshay hool ku yaala magaalada Jowhar , waxaana shir gudoominayay Gudoomiye Ku-xigeenka koowaad ee
Lacag dhan $ 1 million oo dollar oo loogu deeqay Abaarta Soomaaliya
Dowladda oo ku howlan in ay dib u soo ceshato maamulka hawada Soomaaliya